Ibhodi ye-Pcb engenanto, i-Rigid Flexible Pcb, iNdibano ye-Smt Pcb-Fumax
Sijonge ukuba liqabane lakho elithembekileyo le-Electronic Manufacturing eTshayina!Sicinga ukuba iprojekthi yakho yiprojekthi yethu, ishishini lakho lishishini lethu.Sisebenza nzima yonke imihla ngokuthanda kunye nobuchwephesha ukwenza iiprojekthi zenziwe ngempumelelo ukuze siphumeze ulwaneliseko oluphezulu lwabathengi.
Sinikezela ngoluhlu olubanzi lwenkonzo yoyilo olubandakanya uMbane (PCBA), oomatshini kunye neeNkonzo zobuNjineli beSoftware.Udinga nje ukusinika iingcamango zakho, inokuba ngumzobo olula okanye umzobo wokubhala ngesandla, umsebenzi wethu kukwakha kwimveliso yangempela.Okanye ufuna ukuhlaziya iimveliso zakho zangoku kunye namanani aphezulu okanye awongezelelweyo, siya kuyila ukwenza ukuba kwenzeke!
Ixabiso Longezwe nguFumax
Ngaphezulu kwenkonzo egqwesileyo ye-OEM (yokuvelisa) kunye ne-ODM (uyilo), iFumax ikwabonelela ngeenkonzo ezongezelelekileyo kubathengi bethu, kwaye ibancede bafezekise iinjongo zabo zoshishino.
Sinceda abathengi bethu bakhulise ishishini labo.Ingaba inkampani yezizwe ngezizwe ijonge ukuncitshiswa kweendleko kwiimveliso ezikhoyo okanye inkampani yokuqalisa ifuna ukufumana izimvo zabo ukuba zakhiwe ngemveliso entsha, iFumax idlala indima ebalulekileyo ukufaka isandla ekukhuleni kweshishini labathengi bethu!
I-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. izimisele ukubonelela ngemveliso yekhontrakthi yombane ekumgangatho wehlabathi (EMS) kunye neenkonzo zoyilo oluyilayo kubathengi bethu kwihlabathi liphela.
Ukusukela ekusekweni kwethu kwi-2007, i-Fumax inikezela ngezisombululo ezipheleleyo zoyilo lwemveliso kunye nobunjineli, ukufumana izixhobo kunye nokuthengwa kwempahla, i-PCB kunye ne-PCBA (iNdibano yeBhodi yeSekethi eprintiweyo), ukwakhiwa kwebhokisi (iplastiki okanye intsimbi evaliweyo), kwimveliso yendlu (i-100% yomzi-mveliso) kunye ukuthunyelwa kweodolo njl.
Ukwaneliseka koMthengi yiyo yonke into apha eFumax.Senza yonke into sicinga ukudibana kunye nokuthobela iimfuno zabathengi.Umthengi owonwabileyo uthetha lukhulu kuthi!
Funda indlela abathengi abathetha ngayo kwaye bathethe ngayo ngeFumax:
UNoreen (uMphathi wokuThenga) kunye noKurt (uMlawuli wezobuNjineli)
Besisebenza neFumax ukusukela ngo-2008. Sikhethe iFumax emva kokutyelela iifektri ezimbalwa eShenzhen.Umzi-mveliso wakwaFumax uphumelele uphicotho lwethu.Sachukumiseka kakhulu bubuchule babo bomzi-mveliso.UFumax usithumele ngenqanawa amakhulu kunye namawaka ebhodi esele.Asizange sibe nayo nayiphi na imiba esemgangathweni kwiibhodi zabo.Saneliseke ngakumbi ngomsebenzi weFumax.Sijonge phambili ekusebenzeni kunye neFumax kumashumi eminyaka ezayo ... Iprojekthi: Inkqubo yokunkcenkceshela yelanga Iinkonzo ze-Fumax: i-OEM - i-Contract Manufacturing (i-PCBA + i-Plastic Enclosures)
Mikael Björnson (i-CEO, inkampani yokuqalisa e-Stockholm)
Sinomdla kakhulu ekugcineni ubudlelwane obuhle kunye neFumax, kuba siye sakubona unyanisekile, umgangatho- kunye-unengqondo yenkonzo kwaye ibe luncedo kakhulu kwisigaba sethu sophuhliso.Akulula njengomntu wasemzini ukwazi ukuba yeyiphi na umenzi onokuthi uyithembe, kodwa uye wadibana nako konke obekulindelekile.Ndikucebisa kuye wonke umntu endimaziyo kwindawo yokuQala eStockholm ojonge abavelisi.Imibuliso efudumeleyo kuMikayeli
Joe's (uMlawuli oLawulayo, ishishini losapho eTexas)
Into eyenziwe yinjineli yeFumax iyamangalisa.Iqela lakho lenze kwaye lakha iprototype esebenzayo eyona nto siyifunayo.Siyakwazi ukubonisa abathengi bethu ngexesha kunye neziphumo zoshishino ezintle.Nina niyamangalisa.Ndiya kucebisa uFumax kubo nabaphi na abanye abahlobo abafuna ukuyila kunye nenkonzo yokuvelisa.
U-Eric (uMlawuli weMisebenzi eOhio)
Sele iyiminyaka eli-10 ngoku okoko intsebenziswano yethu neFumax.IFumax yenza iibhodi zethu ze-elektroniki kunye nezibiyelo zeplastiki ngexesha elinomgangatho omkhulu.Sivuyiswa kakhulu ngumgangatho kunye neenkonzo zeFumax.Sihlala sizisa iiprojekthi ezininzi ezintsha.I-Fumax iya kuba yinto yokuqala yokukhetha ukwenza ikhontrakthi kunye noyilo lwemveliso entsha!
Abanye babathengi bethu:
Odm PCba IPcb Fabrication kunye neNdibano Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IRigidFlex Pcb IPcb enamacala amabini IFlex PC